Warshada warshadda ogsijiinta caafimaadka ee China ku kaydsantay iyo soo saarayaasha | Sihope
Warshada soosaarka ogsijiinta ee Sihope weelaysan ayaa ah habka soo saarida ogsijiinta kaas oo lagu dhex dhisay weel. Ogsajiinta waxaa laga soo saaraa hawo ciriiri ah iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada cadaadiska lulida ee adsorbtion (PSA). Farsamadan waxay ka soocaysaa ogsijiinta iyo gaaska kale ee hawada cadaadiska ku jira. Nidaamka hawada cufan iyo sidoo kale nidaamka kala-soocidda oksijiinta ayaa lagu dhex darayaa weelka waxayna u taagan yihiin xal isku dhafan oo loogu talagalay kuwa aan haysan meel bannaan oo loogu talagalay nidaamka soo saarista ogsijiinta gudaha dhismahooda ama u baahan warshad soo saarista oksijiinta xaalado daran.
Sihope waxay soo saartaa dhirta weelka lagu shubay, maadaama ay tahay midda kaliya ee soo saarta xalalka weelka ee jiilka ogsijiinta, gudaha guriga. Tani waxay ka dhigan tahay, waxaan xakameyneynaa tallaabo kasta oo wax soo saarkeena ah sidaas darteed waxaan hubineynaa in wax walba lagu sameeyo heerarkayaga.
La rari karo (ku gudub fargeeto-qaadista iyo geesaha ISO)
Loogu talagalay dibadda - weelku waa difaac aad u fiican oo ka hortagga roobka iyo qorraxda,
Bilawga iyo joogsiga tooska ah,
Cadaadiska caadiga ah ee ka soo baxa 4 barG; cadaadis sare oo la heli karo marka la codsado
Cutubka waxaa lagu qalabayn karaa nidaamka ilaalinta iyo qaylo-dhaan maqal / muuqaal ah oo ikhtiyaar ah.
Awoodda: 5 ilaa 100 Nm3/h
daahirnimo 90%, 93%, 95%
weelka ISO: heerka 10ft., 20ft. ama 40ft.
Qiimaha hawlgelinta: 1.1 kWh/Nm3
Cutubka loogu talagalay kulaylka jawiga sare ee deegaanka waxaa lagu qalabeeyay dahaarka weelka iyo qaboojiyaha; dusha sare waxaa lagu daaweeyaa dahaar gaar ah.
Ogsajiinta ka soo baxda unugga dhalisa oksijiinta weel lagu shubay ayaa loo istcimaalay codsiyo badan sida daryeelka-caafimaadka, beerashada kalluunka, ozone, biyaha wasakhda ah, shaqada dhalooyinka, saxarka-iyo-warqadaha iwm.
Warshada soosaarka ogsijiinta ee guurguura ayaa doorbidaysa naqshadaynta xalalka kooban ee bannaanka. Waxaa la dul dhigi karaa saqafka sare ee dhismaha ama meel fog. Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah, ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho waxaanu kuu qaabayn doonaa xal si aad u buuxiso shuruudahaaga.
Hore: Qalabka Ogsajiinta Isticmaalka Habboon ee OEM - Qalajiyaha Hawo Qalajiyaha Qalajiyaha Kuleyl la'aanta ah - Sihope
Xiga: Delta p oxygen samaynta mashiinka
Qiimaha Ogsajiinta Caafimaadka
Warshadda dareeraha Ogsajiinta
Warshada Jiilka Ogsajiinta
Warshada Soosaarka Ogsajiinta
Qiimaha Warshadda Ogsajiinta